Mourinho : oo aamisan in Man United £150m uga badbaabday suuqa kala iibsiga
Sunday, May 27th, 2018 - 12:36:52
Wednesday September 06, 2017 - 14:23:18 in Wararka by Kubad Bile
Tababra Manchester United Jsoe Mourinho ayaa aamisan in kooxdisia suukha kala iibsiga uga badbaaday lacag dhan 150 milyan oo gini sdai u saiga aamisan yahay marka loo fiiryo qaabka ay Psg Ula areegtay Neymar oo 198 Milyan oo ginni ugu biiray.
Manchester United ayaa suuqa kala iibsiga 2017-18 ku qarash gareysay 169 milyan.
Jose Mourinho ayaa aamisan qiimaha Nemanja Maticiyo Romelu Lukaku ay raqiis yihiin marka fiiryo qiimaha ay PSG Neymar ugu dhaqaaqay taasoo kadib beecii Neymar uu suuqa noqday mid sare u kac sameeya.
Marka laga dodo imisa ayay joogi lahaayeen Lukaku iyo Matic ka hor beeci waalnaa ee Neymar axuu Mourinho yiri” waxaan u malaneynayaa Lukaku waxuu August 31 ku fadhin lahaa £150m. halka Matic uu u dhaxeyn lahaa £60m ama £70m.”
Maalihii gu dambeeyay suuqa kala iibsiga wsidoo kale waxa lacag xoogan lagu iibsaday Ousmane Dambele oo £135m ugu biiray Barcelona iyo heshiis amah ah oo qiimaha rasmiga u sandka dambe noqon doono lagu sheegay 166 uu Kylian Mbappe kooxda Paris ugu biirayo.
Sidaa Awgeed waxuu jose Mourinho aamisan yahay in 150 miyan ay Man united uga badbaaday suuqa kala iisbiga , waxuuan ku sababeeyay in ay mar hore oo aysan xaaladda suuqa waalan.
W/D: Osman Haggi